Buuga lagu taliyay - Abaabulka Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Resources talinayo Books
Waxaan had iyo jeer kugula talineynaa buugga Gary Wilson ee "Maskaxdaada on Pornography Internet Pornography iyo Seyniska Soogalootiga"Maxaa yeelay waxay ku qeexday saynis muhiim ah ee aaggan. Waxay si gaar ah ugu fiican tahay sharaxaadda horumarinta maskaxda ee habka gebi ahaanba la heli karo waxayna ka buuxaan sheekooyin cajiib ah dadka ka shaqeynaya soo kabashada. Waxay ku dhisantahay hadalkiisa TEDx Imtixaanka Porn Porn taas oo ka badnayd 9 million views on YouTube waxaana lagu turjumay luuqadaha 18.
Professor Stanford professor of psychology, Philip Zimbardo (tijaabo Xabsiga Stanford) wuxuu la shaqeeyay Nikita Coulombe si uu u soo saaro buug wacan oo la yiraahdo Ninkii wuu kala dhex galay - Maxay dhalinyarada u halgamayaan iyo maxaan ka qaban karnaa. Dhisida isugeyntiisa, Diidmada Guys, Zimbardo iyo Coulombe arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo deegaanka kuwaas oo maanta dhalinaya ragga dhallinyarada ah kuna riixaya abaalmarinta fudud ee laga helo internetka.
Haddii aad jeceshahay filinka filinka 'Inside Out', waad jeclaan doontaa inaad sidan u sii dheeraato, laakiin sidookale hage fudud furaha neurochemicals taas oo saameyn ku yeelata dhaqankeena iyo caadooyinkeena. Waa Caadooyinka Maskax Xumo leh, Maskaxdaada Iskuday si aad u kiciso Serotonin, Dopamine, Oxytocin iyo Endorphin iyadoo Dr Loretta Graziano Breuning. Loretta ayaa si naxariis leh u aqbalay martiqaad ay soo saartay TRF si looga hadlo Melting Pot, Edinburgh bishii Juun. Qolka waa la buuxiyey oo hadalka ayaa si fiican loo helay.
Dib-u-dejiso Maskaxda Cunugaaga - Qorshe 4-Todobaad ah oo lagu joojinayo Dhibaatooyinka, Kordhinta Darajooyinka, iyo Kordhinta Xirfadaha Bulshada by Dr Victoria Dunckley, dhakhtarka dhimirka carruurta. Waxay tiraahdaa in 80% carruurta ay aragtay aysan lahayn dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda (sida ADHD, niyadjab, welwel iwm.) Ayaa lagu ogaaday iyo daaweynba. Dr Dunckley wuxuu ogaaday in ka dib 3 illaa 4 isbuucii si dhakhso ah calaamadaha 'shaashadda' electronic screen syndrome 'waxay yareysaa ama baabi'isaa xaaladaha badankood. Waxay sheegaysaa sayniska iyo kiis khasab ah oo loogu talagalay fiyuuska elektarooniga ah.
Kani waa laba buug oo uu qoray dhakhtar kale oo khibrad badan u leh Maraykanka, Rob Weiss, LCSW, CSAT-S. Wax badan ayaan ka baranay Maandooriyaha Galmada 101 - Tilmaamaha ka bogsashada galmada, galmada, iyo jacaylka qabatinka. Waxay leedahay saaxiibka Hagaha Tilmaamaha 24 Lagu Dhiibo Tababaro Hagaha Hagaajinta Cudurrada Galmada. Waxa uu qabtay shaqo ballaaran oo la leh LGBT + bulshada.
Haddii aad tahay takhtar cilmi-nafsi ah ama la-taliye oo ka shaqeeya arrimaha khadka tooska ah ee internetka dhallinyarada waxaad xiiseyn kartaa buug la yiraahdo "Sidee uga soo kabashada ladagaalanka sawir-gacmeed ee Cyber-The Pornography Workbook"By Christopher Mulligan LCSW. Mulligan waa takhtar ku takhasusay Maraykanka oo qibrad u leh barnaamijka ka soo kabashada 16 ee toddobaadka. Waa buug-is-daabac ah oo leh sawirro yar, laakiin haddii kale waa kheyraad weyn. Waxay barbar dhigeysaa barista khabiirada goobta sida dhakhtar Dr Patrick Carnes iyo tacliinta Dr David Delmonico iyo Dr Elizabeth Griffin.
Galmada, Jecelka iyo Baraha Bulshada - Kala Hadlida Dhalintayada Da'da Dijital ah by Allison Havey iyo Deana Puccio, (Ameerikaanku laakiin saldhiggoodu yahay London) ayaa aasaasay Mashruuca RAP. Tani waa buug aad loo akhrisan karo laba hooyadood ee 5 dhalinyaro ah oo leh talooyin wax ku ool ah oo loogu talagalay waalidiinta ku nool xaqiiqada nolosha dhalinyarada ah ee maanta la xiriirta. Waxay sidoo kale ka wada hadlaan dugsiyada ku saabsan saameynta internetka ku saabsan dabeecadaha da'da yar iyo fayoobaanta.